Uhlalutyo loovimba-Funda ukuRhweba
UWilly Woo uDiza i-Crypto Holding Growth yamaqumrhu ngo-2021
Ngokwengxelo yamva nje evela kumhlalutyi odumileyo we-on-chain uWilly Woo, umyili weWoo Bull kwiqonga letshathi yokuhlalutya, imibutho ethengiswe esidlangalaleni (iinkampani) ikhulise i-crypto yabo edibeneyo nge-123.75% ngo-2021, bezisa ukugcinwa kwabo kwe-crypto ngokurhabaxa. I-96,000 BTC ukususela ekuqaleni konyaka ukuya kwi-216,000 ye-BTC ekupheleni kweminyaka.
Oku kutsiba kukhulu kubonisa umdla okhulayo kwii-asethi zedijithali ngamaqumrhu kunye nabatyali-mali bamaziko kwaye kuqaqambisa ukukulungela kwabo ukubamba i-BTC kwiphepha labo lomncono.
Kuyathakazelisa ukuba eli qela (abatyali-mali beziko) libambe kuphela i-20,000 ye-BTC ekuqaleni kwe-2020 kwaye ikhule le nto ibamba nge-400% ekupheleni kwaloo nyaka, ngokutsho kwengxelo evela kumphandi wezobuchwepheshe uKevin Rooke.
UWoo wenze isityhilelo sakhe ngothotho lweetweets mva nje, ephawula ukuba: Ukusukela kwinkomfa ye-MicroStrategy's 'Bitcoin for Corporations' ngoFebruwari 2021, iinkampani zikawonke-wonke eziphethe i-BTC ebalulekileyo ziye zafumana isabelo semakethi kwii-ETF ezibonwayo njengendlela yokufikelela kubhentsiso lwe-BTC kwiimarike zezabelo zoluntu.
I-Bitcoin Holdings ephezulu kwi-Balance Sheet nguWilly Woo
Okwangoku, idatha ibonise ukuba inkampani yolawulo lwe-crypto-asethi i-Grayscale yabanga isabelo esiphezulu se-BTC ebambe i-2021, kunye ne-645,199 BTC kwi-balance sheet yayo ekupheleni kwe-2021. Ngayo yonke i-ETFs yendawo kunye neenkampani ezipheleleyo ze-903,988 BTC kwi-2021, i-Grayscale ilawulwa a efikelela kwi-71% yazo zonke izinto ezikhoyo kumaziko.
IMicrostrategy kaMichael Saylor ibambe indawo yesibini, ibambe phantse i-6 yeebhiliyoni zeedola kwii-asethi ze-crypto. Inkampani ekhokelayo yezobuntlola, eyaziwa ngokuba yi-Bullish nge-Bitcoin, ibambe i-124,391 BTC ekupheleni kuka-2021. Okubangel 'umdla kukuba, le nkampani ikhulise ukugcinwa kwayo kwe-BTC ngaphezu kwe-76% ngo-2021, njengoko yaqala unyaka nge-70,000 BTC kuphela kwibhalansi yayo. iphepha.
Ukuqhubela phambili, amanye amaqumrhu amakhulu abambe iBTC aquka iTesla, iGalaxy Digital, iSquare, iMarathon Digital, iArgo Blockchain, i-Exodus Movement, iCoinbase, iHut 8 Mining, iRiot Blockchain, iBitfarms, iDigitalX, iNeptune Digital Assets, Cypherpunk Holdings, Fortress Technologies Mahala.
tags uhlalutyo, Cryptocurrency, iindaba
IJapan isete ukurekhoda uLwahlulo lwe-GDP oluphezulu kwisithuba seshumi leminyaka kulandela iBump yoLwabiwo-mali oluvuselelweyo
Uqikelelo lokukhula kweJapan luye lwanyuka lusuka kwi-2.2% yoqikelelo lokukhula kwe-GDP olwenziwe ngoJulayi lwaya kutsho kwi-3.2% ngo-2022, lulandela irekhodi yohlahlo lwabiwo-mali lovuselelo olongezelelweyo olwamkelwe yipalamente yaseJapan kwiveki ephelileyo. Ukuba kuyafezekiswa, oku kukhula kuya kuba kolona hlumo lukhawulezayo ukusukela ngo-2010, xa uqoqosho lwelizwe lase-Asiya lurekhode ukukhula nge-3.3% emva kokudodobala kwezimali zehlabathi.
Ngokweengxelo, inkcitho yokuvuselela yaseJapan iza kunyuka nge-1.5% kulo nyaka-mali kunye ne-3.6% kunyaka-mali olandelayo. Nangona kunjalo, urhulumente waseJapan unciphise uqikelelo lwakhe lweGDP yalo nyaka-mali ukuya kwi-2.6%, ephele ngoMatshi ukusuka kwi-3.7% kunyaka-mali odlulileyo.
UQoqosho lwaseJapan lungcono kwi-Yen ebuthathaka
Ngeli xesha, iJapan iye yafumana ulwaphulelo lonyaka lwe-3.6% kwi-Q3 2021, kulandela ukuvela kwakhona kosulelo lwe-COVID-19 oluchaphazele ukusetyenziswa kwabucala, igalelo eliphambili kwi-GDP yaseJapan.
I-Yen yawa malunga nedola ngoLwesine njengoko i-USD / JPY ithathe i-4-iveki ephakamileyo kwi-114.51, ilandela i-bullish ekufutshane ne-Japan Nikkei Stock Index. I-Yen yafumana uxinzelelo olongezelelweyo lwe-bearish ekukhutshweni kwemizuzu yentlanganiso ye-BoJ ka-Oktobha, eyaphawula ukuba ubuthathaka be-Yen bunempilo yokuma kwezoqoqosho ngokubanzi.
I-Yen nayo ibonise ubuthathaka malunga ne-euro ngoLwesine, njengoko i-EUR / JPY iqhubekile nohambo oluya phezulu ngosuku lwesithathu olulandelelanayo.
tags uhlalutyo, BoJ, Japhan, Yen Japanese, iindaba
IiRali ze-USD / JPY ezilandela ukuPhuculwa koMngcipheko woMtyalo-mali
I-USD / JPY iphinde yaqala ngokukhawuleza kwiseshoni yaseLondon ngoLwesithathu, irekhoda inyanga entsha ephezulu kwi-114.33. Oko kuthethiweyo, i-forex pair of bullish momentum yosuku lwesibini olulandelelanayo iza ngenxa yezinto ezininzi ezisebenza kunye.
Okokuqala, ithoni yomngcipheko jikelele kwimarike kunye neBhanki yaseJapan's (BoJ) imbonakalo ye-dovish yanciphisa isibheno sokhuseleko lwe-yen kwaye yaxhasa i-USD/JPY pair.
Ngeli xesha, uloyiko malunga nokwahluka kwe-Omicron ye-superspreader kwehle kancinane namhlanje kulandela iingxelo zokuba izitofu zokugonya ezikhoyo zisebenza ngakumbi ekulweni okwahluka kwe-Omicron kunokuba bekukholelwa ngaphambili. Olu phuhliso lukhulise ukuzithemba kwabatyali-zimali kwiimarike, luqhuba utyalo-mali kude kwii-asethi ezichasene nomngcipheko kunye neemali.
Ngaphaya koko, i-yen yaseJapan yatsalwa phantsi yi-BoJ's dovish stand, emva kokuba imizuzu evela kwintlanganiso yomgaqo-nkqubo we-BoJ yamva nje ekhutshwe namhlanje ibonise ukuba amalungu ebhodi axhasa imfuno yokugcina umgaqo-nkqubo wokuphulukana nelahleko enkulu, kuthathelwa ingqalelo ukuba i-2% ekujoliswe kuyo yokunyuka kwamaxabiso ayinakwenzeka. kuzuzwa kwakamsinyane.
Ukuthotywa kwe-US Treasury Yield Capping Gains ye-USD/JPY
Kwi-flip side, i-dollar yase-US yayinandipha inkxaso evela kwi-Fed's hawkish stance, kulandela isaziso sokuba inokuphumeza ubuncinane ukunyuka kwamazinga amathathu ngo-2022. Nangona kunjalo, ukuhla okuhlaziywayo kwi-US Treasury bond izivuno kuthintele iinkunzi ze-USD ekubekeni iibheji ezinobundlobongela. , i-capping more gains for the USD/JPY.
Ukuqhubela phambili, abathathi-nxaxheba beemarike ngoku balindele ukukhutshwa kwezoqoqosho kwi-US ukubonelela nge-USD / JPY pair.
tags uhlalutyo, Forex, iindaba, USD / JPY